भर्जिन केटी र अन्टी लाई चिकेको - Virgin kt ra aunty lai chikeko Part 1 - Naughty Nepali
Home » Nepali Sex Stories » भर्जिन केटी र अन्टी लाई चिकेको – Virgin kt ra aunty lai chikeko Part 1
Virgin kt ra aunty lai chikeko Part 1
कुरा आज भन्दा ३ वर्ष अघिकोको हो, त्यसबेला म मेरो अन्टिकोमा बसेको थिएँ । मेरो १२ को परीक्षा धेरै नजिक आएको थियो । सायद बैशाख महिनाको १५/१६ तिरको कुरा हो, १५ गते एउटी केटि (सोस्थिका गुरुङ) गाउँबाट एस्.एल.सी परीक्षा सकेर काठमाडौँमा नै विज्ञान संकायमा +२ पढ्न भनि मेरो अन्टिकोमा आएको रहेछिन् । उनको घर झापा मा रहेछ र उनको ममी मेरो अन्टिको धेरै नजिकको साथी हुनुहुदोरहेछ, त्यसैले होला उनि मेरो अन्टिकोमा बस्न भनि आयकी । सायद काठमाडौँमा मेरो अन्टि बाहेक अरु कोहि पनि अफ्नो नजिकको आफन्त नभएर नै होला उनि मेरो अन्टिकोमा आएकी । उनि झापाबाट १४ गते बेलुका रात्रि सेवाको सवारीमा हिडेकी रहेछिन्, त्यसैले येहाँ काठमाडौँमा बिहान करिब ५ बजे तिर आइपुगेकी थिन् । उनीसंग मोबाइल नभएर नै होला उनले मेरो अन्टिको मोबाइलमा ल्याण्डलाइनबाट फोन सम्पर्क गरकी थिन्, जुन बेला म टिभि हेरिरहेको थिएँ, अनि मैले हेरें कसले फोन गरेछ भनि त्यसपछि अन्टिलाई बोलाएँ, “फोन आयो अन्टि”; अन्टि-“हेर त कसले गरेको”; म-“काठमाडौँको ल्याण्डलाइनबाट गरेको छ”;
अन्टि- “उठौँ त ?”
अनि मैले उठायको त, एउटा मधुर र सानो स्वरमा कोइ केटि बोलेको आवाज मेरो कानमा गुन्जियो, म त झसङ्ग भएँ र एकछिन त मेरो मुखबाट आवाज नै निस्केन । त्यसपछि मैले नम्र भएर सोधें, “को बोल्नु भएको होला”; उनले भनिन, “यो संजना अन्टिको नुम्बर होइन”, हो तपाई को बोल्नुभएको, मैले भनें अनि “म सोस्थिका बोलेको अनि के घरमा संजना आन्टी हुनुहुन्छ “-उनि; “हुनुहुन्छ दिने हो ?”-म; “हजुर दिनुहोस्न”-उनि; “अनि मैले सोस्थिकाले हजुरलाई फोन गरेको छ भनि आन्टीलाई बोलाएँ”; आन्टी-‘किचेनमा लिएर आऊ त”; मैले आन्टीलाई फोन दिएर फेरी टिभि कोठामा आएँ, केहि समाए पछि मलाई आन्टीले “रोजित किचेनमा आऊ त” भनि बोलाउनु भयो । अनि म किचेनमा गएको त आन्टीले मलाई सोस्थिकलाई लिएर आउन मात्र के भन्नुभयको थियो, म मनमनै हर्सित हुदै भने कहाँ नि? “कलंकीमा- कलंकी च्वोकमा क्या”-आन्टीले भन्नुभयो । मैले हुन्छ भनि कपडा चेन्ज गरेर कलंकीतिर लागें ।
कलंकी च्वोकमा धेरै समान क साथ एउटी परी जस्ती केटि उभिएर बसिरहेकी थि। मैले मनमनै सोचें सायद उही हुनुपर्छ भनि तेस केटि भए ठाउँमा गएर सोधें तिमि……सोस्थिका……संजना आन्तिको……झापाबाट आएकी……Yeah!… “हजुर”-उनले भनिन; समान धेरै भएको हुनाले मैले एउटा ट्याक्सी बोलाएर सबै समान ट्याक्सीमा हाल्न लगाएँ अनि हामी दुवै जना ट्याक्सीमा चढेयौ। उनि केहि पनि नबोली बसिरहिन्, त्यसैले मैले नै बोल्न सुरु गरें, “तिमि काठमाडौँ के गर्न आएकी?”; “पढ्न”-उनले भनिन; “पढ्न?”…मैले भने…के पढ्न नि?”; उनले जवाफ दिइन् “+२ Science”; “के तेसो भए तिमि यस्.यल.सी. परिछ्या सकेर आएकी हौली होइन?”; “हो”…सोस्थिका; अनि मैले भने के तिमि एस् भन्दा अघि पनि काठमाडौँ आयकि थियौ?; “नै- यो नै पहिलो पटक हो”-सोस्थिका ।
यस्तै-यस्तै मिठा-मिठा कुराहरु गर्दागर्दै आन्टीको घरमा आइसकेको रहेछौं, समय बितेको नै पत्तो भएन। ट्याक्सीबाट समान झरेर ड्राईभरलाई भाडा दिई हामी भित्र गयौं । “ओहो नानु ता यत्री ठुली भइछौ”-नभेटेको त धेरै पो भएछ हघि’-आन्टीले भन्नुभयो; फेरी आन्टीले “ममी सन्चै हुनुन्छ त नानु ?’; सोस्थिका-“हजुर”; आन्टी-बाटोमा केहि त भएन नि होइन ?नाई केहि पनि भएन तर भोमिट चाँही धेरै भयो”- सोस्थिका । आन्टी -जाऊ कोठामा आराम गर म Breakfast तयार गर्छु; “हवस्”-सोस्थिका अआन्टी- रोजित सोस्थिकलाई Guest Room मा लैजाऊ त एकछिन आराम गर्छिन। मैले हुन्छ भने अनि आन्टी किचेनतिर लाग्नु भयो र हामी कोठातिर ।
“य हजुरको नाम रोजित हो?”-सोस्थिका; मैले मुन्टो हल्लाएर हो भनें कोठामा म एउटा सोफामा बसें भनें उनि अर्कोमा । हामी टिभि हेरिरहेका थियौं, सोस्थिकाले भनिन, “Toilet कहाँ छ ?” फ्रेश हुन हो मैले भनें तर उनले होइन पिसाब फेर्न। “ये……बाहिर दायाँ साइडमा छ” सोस्थिका Toilet गईन् । आन्टीले Breakfast लिएर आउनु भयो । सोस्थिका खोइ त? -आन्टी Toilet गएकी छिन्, मैले भने सोस्थिका पनि आइन् अनि हामीलाई Breakfast खान भनेर फेरी किचेनतिर लाग्नुभयो आन्टी। हामी Breakfast खादै टिभि हेर्न थालौं । तिम्रो यस्.यल.सी. परिछ्या कस्तो भयो त ?- मैले भनें; सोस्थिका-राम्रो भयो; हामी यस्तै कुरा गर्दै थियौं आन्टीले खाना खाना बोलाउनु भयो अनि हामी दुवै खाना खान किचेनतिर लागौं ।
खाना खाएपछि आन्टीले मलाई सोस्थिकलाई काठमाडौँ घुमाईदिनु हुन्छ यदी तिमीलाई फुर्सद भय, मैले हुन्छ भने अनि केहि खान मन लग्यो भने रोजितलाई भन्नु भनेर आन्टीले सोस्थिकलाई भन्नुभयो र मलाई केहि पैसा दिएर उहाँ अफिस जानु भयो ।
हामी फेरी टिभि हेर्न थाल्यौं । टिभि हेर्दा मैले भनें सोस्थिका घुम्न जाने हो ?थकाई लागेको छ भोलि घुमौंला नि सोस्थिकाले भनिन् । Ok…म…मेरो exam आएको छ म पढ्छु तिमि रेस्ट गर्नु ल । सोस्थिका- “हस्” अनि हजुर कति class मा हो ? १२ मा हो भनि म पढ्न थालें, उनि चाँही टिभि हेरिरहिन् । म अफ्नो सुरले पढिरहेको थिएँ सोस्थिका त कति बेला निदाईसकिछिन्, मलाई पढ्न मान्न लागेन। उनको त्यो गुलाबी फेसेले मलाई भुतुक्कै पर्यो । म उनलाई नै हेरिरहें तर उनलाई छुन समेत सकिन मैले आफुले आफैंलाई बसमा लिन नै सकिन तेसैले तहाँ बाट उठेर म कौसीमा गएर बसें । करिब एक घण्टा जति कौसीमा बसेपछि म टिभि कोठामा आएँ ।
aunty chikai, Aunty Lai Chikeko, nepali chikeko katha, nepali xada katha, virgin kt lai chikeko, Virgin kt ra aunty lai chikeko, virgin kt sanga ko chikai
Shreya ra tyo raat – nepali sex story